Yakakurumbira Car Sevhisi Uber yekupa wheelchair-inosvika basa
Uber, iyo-yekugovana-inowirirana kambani inowirirana nevatasvi nevatyairi ne smart-foni app, ikozvino zvinopa kubatana kune wiricheya-kufambidzana mota muPhiladelphia, Uber akadaro Muvhuro.
Uber yakabvumirana nevatyairi vane paratransit vane marezinesi vane kufambidzana mota, uye vatengi vanogona kutanga kushandisa sevhisi ipapo, mutauri weUber Taylor Bennett akadaro Muvhuro.
Chiziviso ichi chinouya zuva rimwe komiti yezvemitemo isati yasangana muHarrisburg kuti itarise kubvumidza Uber uye mamwe masevhisi-ekugovana mashandiro kuti ashande muPhiladelphia nenzvimbo dzakatenderedza.
Kumwe kwekunyunyuta pamusoro peUber nevashandi vetekisi vePhiladelphia kwave kuri kuti Uber haina kupa wheelchair kufambidzana motokari. Philadelphia Parking Authority, iyo inodzora matekisi muguta, iri kuburitsa makumi mashanu emamallion e kufambidzana minivan cabs gore rino, iine zana nemakumi mashanu ichapihwa mumakore manomwe anotevera.
Izvi zvese zviri kuchinja nekukurumidza zvakanyanya nekusimudza uye Uber kuve nehondo kunharaunda uye nemusika mugove. Nemakambani ese ari maviri aine nzvimbo yakakosha kwazvo pa kufamba vakaremara uye wiricheya inowanikwa musika, ingori nyaya yenguva mazhinji emakambani echinyakare eTekisi akasununguka kuhondo iyi. Zviripachena kuti munguva dzemamiriro ezvinhu echirwere, kureva COVID 19, tinoona kuti makambani aya ane homwe dzakadzika anoenderera mberi kusunda ivo paumire kana musika wadzoka. Ndiani anofanira kukunda?
Ko makambani mahombe anotove neiyo kufamba kutadza kufunga? Vanogona sei kuve nemutoro kuruzhinji? Tinoda kuve nechokwadi chekuti vanochengetwa kushoko ravo. Nguva nenguva, tinoona makambani achinetseka kuita purofiti. Purofiti zvakakosha. Asi ndicho chinhu chikuru here? Makambani aya anofanirwa here kuchengeta wepazasi sekufarira kwavo chete? Kana ivo vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti mota yega yega wiricheya kufambidzana?
Zvakare, zvakanaka kuti uzive kuti isu tinofanirwa kuchengetedza inzwi redu kunzwikwa. Tinofanira kuratidza kuruzhinji izvo zvinodiwa. SaGeorge Floyd. Iwo manzwi anonzwika kana vanhu vauya pamwechete. Isu tinoona shanduko zuva nezuva. Shanduko dzevanhu vachiratidzira. Iko kushandurwa kweshoko kupinda mumugwagwa. hwiricheya vashandisi vanofanirwawo kuwana mukana wakawanda. Pamusoro pekuchinja, inoda kugadziriswa. Imwe nzira yekuraira haisi chete kuburikidza nemutemo. Inogona kunge iri kuburikidza nemamwe mapato matatu.
Isu tinoona izvi kuburikidza nemapurisa izvozvi. Iwe unofanirwa kunzwa uye vhoti yako inofanira kuverenga. Tumira email ku editor@karmanhealthcare.com kana uine sarudzo. Inoverenga uye iri zvinokosha. . Uyezve, ndicho chinhu chakakodzera kuita.
[btn link = "http://www.philly.com/philly/business/kutakura/20140923_Uber_to_offer_wheelchair-accessible_car_service.html#V0rbqCsHzUgjCVGU.99 "target =" _ blank "] Verenga Nyaya Yakazara [/ btn]
Vadzidzi Vanogadzira Kukwirisa Wiricheya Kuna Pedro
Tracy Morgan Wiricheya-Akasungwa: Anogona Kusazombofamba Zvakare